AmaPolo abekhiphana inkani zibuya
BABHEME bakholwa abantu abebethamele umjaho, iFalken Polo Cup eKillaney Raceway, eKapa ngempelasonto.
INTATHELI YEZEZIMOTO | May 17, 2019
Bekuwumzuliswano wesithathu walo mjaho lapho kuncintisana khona amaVolkswagen Polo angu-25 afanayo.
Kucace ngesikhathi abashayeli besazilolonga ukuthi kuzoba nezigameko ezahlukene. Ngemuva komjaho wokuqala wokuhlunga, abashayeli abangu-17 baqophe izikhathi ezifanayo.
Umshayeli wendawo, uJurie Swart uqale wabeka isikhathi esiphambili ngaphambi kukaBradley Liebenberg nomunye umshayeli wendawo uDario Busi. Okuwuye ozihola phambili kulo mncintiswano ubesendaweni yesihlanu.
UMatt Short uqophe isikhathi esiphambili ngesikhathi abayisithupha abaphume ekuqaleni ngesikhathi sekuhlungwa benikezwe ithuba lokuphinde baqophe esinye isikhathi, ukuze kuzobhekwa izindawo abazoqala kuzo. Imoto kaMatt kutholakale ukuthi ingaphansi ngo-2 kilograms kunesisindo esivumelekile, okumenze wahlawuliswa wabekwa ekugcineni. UBradley nguye obekwe endaweni yokuqala, uJeffrey waba kweyesibili ngaphezu kukaJurie, Jason Campos noDArio.
UBradley uthintene nomunye umshayeli ekhoneni lokuqala okumkhiphile emncintiswaneni. UJeffrey nguye obesezihola phambili ngaphambi kokuthi uJurie amdlule, adle umhlanganiso. UJeffrey uphume endaweni yesibili, kwathi eyesithathu yathathwa nguDario.
Emjahweni wesibili kunqobe uBradley, eyesibili ythathwa nguJustin Oates, kweyesithathu kwaba nguChris Shorter.
Imiphumela yosuku ibhekwa ngokuhlanganisa izikhathi zemijaho yomibili.
UJeffrey uphume phambili, kweyesibili kwaba nguClinton Bezuidenhout, kwathi kweyesithathu kwaba nguDario.
Umzuliswano olandelayo uzoba se-Aldo Scribante circuit ePort Elizabeth ngoJuni 15.